Sariir go'an - Moi Mili
Sariir waxbarasho oo loogu talagalay dhallaanka iyo carruurta.
Dukaankayaga tooska ah ee internetka waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa matoor-gacmeedka curiyaha leh ee gacanta lagu sameeyay. Joodariyayaashan qurxoon ayaa dhameystir weyn u ah teendhooyinka Moi Mili.
Sariiraha midabada leh iyo moodeelada leh ee loogu talagalay carruurta ayaa ah cunsur weyn oo ka mid ah qurxinta qolka carruurta, laakiin waxkastoo ay abuurayaan xaalado kufiican madadaalo. Sariirta jilicsan oo raaxada leh ayaa lagu fidin karaa meel kasta - qolka fadhiga, dabaqa ama jardiinada. Gogosha sariirta ee loo yaqaan 'Teepee' ee carruurta ayaa si fiican ugu dhexgaari doona barkimooyinka gacmaha laga sameeyay - qodobbadaas waxaa loo sameeyay si taxadar leh oo faahfaahsan.
Joodar caleenta carruurta "linen dabiiciga ah"
Sariirta caleenta "cawlan" ee caleenta carruurta
Gogosha 'buluug circus' ah oo loogu talagalay carruurta
Joodar caleenta carruurta "Caddaan iyo cawlan"
Dusha carruurta "caramel" qolof
Jooniska caleenta "mustard" ee carruurta
Shell / caleen dusha sare oo leh barkimo 3 ah
Gogoldhaafka carruurtu waa "ciid"
Gogoldhaafka carruurta "budo casaan" qolof ah
Gogosha carruurta "Grey linen"
Sariirta caruurta "Grey iyo reexaanta"
Sariirta caruurta "Mint iyo beige"
Mat daloolka carruurta oo loogu talagalay carruurta
Joodar caleenta caruurta "casaan cad"
Goobo goobaabta carruurta
"Marsala" qololka sariirta carruurta
Caruusadda "buluug" ah ee carruurta
Joodariga caleenta "Morskie Oko" carruurta loogu talagalay